Semalt Expert: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny fijerena filtre
Nanazava i Ivan Konovalov, Semalt mpanara-maso ny Customer Success, fa tokony hampiasa solosaina ianao mba hanovàna sy hamerana ny angon-drakitra. Azonao atao, ohatra, ny mampiasa filters mba tsy hanakanana ny fifamoivoizana amin'ny adiresy IP manokana. Azonao atao ny manolotra tahirin-kevitra avy amin'ny subdomains sy ny torolàlana tianao ary afaka mamadika pejy dynamic amin'ny lahatsoratra sy tsipika azo vakiana. Tsy maintsy mitady alàlana amin'ny alàlan'ny kaonty alohan'ny fitantanana ireo sivana ianao.
Amin'ity fizarana ity dia tokony hametraka filaharana fototra ianao aorian'ny fijerena ilay horonan-tsary, izay ampahany amin'ny programan'ny Digital Analytics Fundamentals. Izany dia nampidirina tao amin'ny Analytics Academy. Ity rohy ity dia hita eto: analyticsacademy.withgoogle.com.
Tsy tokony hampidirina amin'ny data Google Analytics ny solosainao. Noho izany, tokony hampiasa ny sivana ianao mba hanesorana na hampidirana ny fifamoivoizana amin'ny sehatra manokana, toy ny orinasa orinasa na ISP. Rehefa voamarikao ny anaran'ilay sehatra, dia tsy tokony hampiditra ny mari-pamantarana mpamorona azy tsy misy fahazoan-dalana.
Ny zavatra iray hafa tokony hotadidinao dia tsy afa-misaraka afa-tsy ny adiresy IP fantatra..Ity sivana ity dia azo ampiasaina mba hisintonana na hampidirina ny kliotsy avy amin'ny adiresy IP manokana na loharano iray manokana. Ny fanivana ny adiresy IP misy io safidy io dia azo atao. Raha te-hanivana adiresy maromaro kokoa ianao, dia tokony hampiasa ny safidy Custom Filter ianao raha tsy esorina izany. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny adiresy IP raha hamaritra ny fanehoan-kevitra voafetra ho toy ny sifepifan'ny sivana.
Famaranana: Azony atao ny manilika ireo raki-daza fametrahana ny log izay mifanandrify amin'ny lamina fisafidianana. Tokony tsy hiraharaha ireo andalana mifanaraka aminy ianao mba hiantohana ny fiarovana ny vohikalanao amin'ny aterineto.
Include: Anisan'izany ny lahatahiry rakitra log izay mifanandrify amin'ny lamina fisakanana. Ireo hadisoana tsy mifanentana rehetra dia tokony hohadinoina, ary tsy azo itokisana ny tahirin-kevitra ao anatin'io tatitra Google Analytics io.
ambany kely ary ny lehibe indrindra: Azo atao ny mamadika ny votoatin'ny saha ho ambany kely na lehibe, mifanaraka amin'ny fepetra takinao
Fikarohana sy fanonerana: Sila tsotra sy tsara indrindra azo ampiasaina amin'ny fitadiavana lamina ao anaty saha. Manampy amin'ny fanoloana ny lamina miaraka amin'ny safidy mety indrindra.
Advanced: Manampy anao hanorina ny saha avy amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa. Ny motera fanivanana dia hampihatra ireo teny rehetra ao amin'ny saha Extract roa. Manamboatra sehatra hafa miaraka amin'ny fanampian'ny solontenan'ny Constructor.
Ny fampiasana sivana:
Eto izahay dia nilazalaza ny fampiasana sivana sasany:
Raha tsy misy ny fifamoivoizana ao anatin'ireo tatitra: Azo ampiasaina ny sivana amin'ny fisintonana ny fifamoivoizana ao amin'ny tatitra Google Analytics. Noho izany, tokony hametraka ireo sivana izay mamaritra ny adiresy IP tianao haloa ianao.
Mitatitra ny hetsika ao amin'ny fitehirizana manokana: Raha toa ka mitady tatitra momba ny hetsika ao amin'ny tari-dàlana manokana ianao, dia tokony hanangana sivana mety hahafantarana ireo lisitra ireo.
Mitandrema ny fizaram-pizahantany amin'ny fomba fijery samihafa: Raha te-hanaraka ny subdomains ianao, dia tokony hamorona fomba fijery samihafa ho an'ny domains sy ny subdomain tsirairay. Tokony hampidirinao koa ny sivana mba hamantarana ny sokajy manokana Source .